Xasuuqii Wagala, Wajer, Waqooyi Bari Kenya, Wax ma Laga Yidhi? – Rasaasa News
Xasuuqii Wagala, Wajer, Waqooyi Bari Kenya, Wax ma Laga Yidhi?
Feb 14, 2011 1984 Maalintii Gumaadka ee Wagala, February 14, Wajer, Waqooyi Bari Kenya
Maanta oo ay bisha February ay tahay 14, 2011 waxay ku beegan tahay sanad guuradii 27 aad ee ka soo wareegatay gumaadkii ka dhacay garoornka diyaaradaha Wagala, magaalada Wajeer, ee waqooyi Bari kenya [NFD], oo February 14, 1984 ay ciidamada Kenya xasuuqeen 2, 000 oo ruux oo Somali ah.
Xasuuqa loo yaqaan Wagala oo ka dhacay magaalada Wajeer ayay dawlada Kenya ku dishay 2,000 oo ruux oo Somali ah. Ciidamada dalka Kenya oo ah kuwa aan naxariis u lahayn dadka Somalida ah ee ku nool gabalka waqooyi bari Kenya [NFD], ayaa dadka Somalida ah waxay ula dhaqmaan sidii dad aan dalka u dhalan.
Ciidamada dalka Kenya ayaa February 7, 1984 waxay magaalada Wajeer ka uruuriyeen 5,000 oo nin oo Somali ah, waxaa kale oo ay February 10, isla bishaas magaalada Garrisa xero ku uruuriyeen 6,000 oo kale oo Somali ah.
Shantii kun ee Somalida ahay ee ay ciidamada Kenya ku xero-oodeen wagala, baad iyo biyo waa laga soomiyey muddo todobaad ah, waxaa kale laga xayuubiyey wixii dhar ay xidhnaayeen. Ka dib kolkii ay dadkaasi toddoba maalmood gaajo, Oon, dhaxan iyo kulayl ku jireen Wagala ayey maalintii todobaad ayey dadku naf ishaynwaayeen oo ay jiidheen Booliska. Dabadeedna Booliska Kenya ayaa xabad ku furay, waxaana halkaasi ku dhintay 2,000 ruux, 3,000 ruux waxay jiidheen Booliska.
Todobaad ka dib, waxay booliska Kenya damceen in ay laayaan dadkii ku xera-oodnaa Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Garrissa. Dawladii Somaliya ee markaas jirtay oo aad uga xumaatay xasuuqa ka dhacay Wagala ayaa sheegtay in dadkaas sabab la,aanta ay Kenya u laysay ay Somali yihiin, dad kale oo badana ay ugu xaraysan yihiin Garrisa. Waxay Somaliya ku hanjabtay in ay soo weerari Kenya hadii ay waxyeesho dadka ku xaraysan garoonka Garrissa, hanjabaada Somaliya awgeed dadkii Garrisa waa la sii daayey.
Tirada dadka intaas la egg ee lagu xasuuqay Kenya ilaa iyo maanta ma jirto cid loo qabtay ama xitaa raali galin ka bixisay xasuuqa dadkaas.
Daka Somalida ah ee reer Keyna, waa dad aqoon leh, waxaase nasiib daro weyn ah in ilaa iyo maanta ayna jirin wax u dooda ama ka hadla xuquuqda dadkaasi la xasuuqay, hadii ay noqon lahayd masuuliyiinta u dhalatay gabalka waqooyi Bari Kenya [NFD], aqoonyahanka iyo xitaa dadweynaha caadiga.
Dhibaatadan mid la mid ah ayaa waxay ka dhacda magaalada Garrissa sanadkii 1968, xiligaas oo si la mid ah mida ka dhacday Wagala, intii xero lagu uruuriyey dad dabadeena kuligood la laayey.
Waxaa arintan mudo daba socday hal wiil oo Aabihii uu ka mid ahaa dadkii Wagala lagu xasuuqay, wiilkaas oo ku nool dalka Canad, waxaa uu waayey hal ruux oo markhaati u noqda kolkii uu maxkamad geeyey dalka Kenya.
Dalka Kenya oo sheegta in uu yahay dal dimoqrati ah, ayeyna arinta dimoqraatiyadu saamaynin dadka Somaliyed ee ku nool waqooyi Bari Kenya [NFD], waxayna Booliska Kenya ilaa iyo maanta ula dhaqmaan dadka Somalida ah si ka gadisan dadweynaha kale ee Kenya.
Doorashadii ismaandhaafka keentay ee ka dhacday dalka Kenya 2008, waxay Boliska Kenya si aan toos ahayn u dileen boqolaal ka soo jeed qabiiladii xukunka isku haystay.
Waxaana maanta socota in masuuliyiin badan oo Kenyan ah ay shaqadooda waayi doonaan qaarna la xukumi doono. Waxaa kale oo magdhaw la siin doonaa qoysaskii ay dad kaga dhinteen khilafka siyaasadeed.
Hadaba kumanaanka Somalida ee labada goor ee is xigta lagu xasuuqay Waqooyi Bari Kenya miyayna lahayn wax magtooda sheegta?
Tacsi: Sheekh Caan ka Ahaa Waqooyi Bari Kenya [NFD], oo ku Geeriyooday Magaalada Nairobi
Kooxaha Argagixisada ah ee ay Eritrea Hoyga Siiso oo Ugaadhsanaya Beesha Ogadeen